बिजेपी नेतृले अधिकारीलाई चप्पलले कु’टिरहेको भिडियो भाइरल (भिडीयो सहित) – Khabarhouse
Khabar house | २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०३:२१ | Comments
एजेन्सी : हरियाणा भारतीय जनता पार्टीकी नेता सोनाली फोगाटको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा भा’इरल भएको छ, यसमा उनी एक व्यक्तिलाई चप्पलले कु,टिरहेको देख्न सकिन्छ। टिकटक स्टार सोनाली फोगाटले गत वर्ष राजनीतिमा कदम राखेकी थिइन् र बिजेपीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले हरियाणा विधानसभा चुनावमा आदमपुर सीटबाट कांग्रेस कुलदीप विश्नोई वि’रुद्ध चुनाव लडे’की थिइन् ।
यद्यपि, चुनावी मैदानमा उनी विश्नोईसँग प’राजित भएकी थिइन् । पि’टाई खाने व्यक्ति हिसार मार्केट कमिटीका सचिव हुन् । सोनाली खाद्यान्न बजार किसानका केही स’मस्या लिएर उनलाई भेट्न गएकी थिइन् । भिडियोमा देखिए अनुसार उनको ती अधिकारीसँग बहस भयो त्यसपछि उनी अधिकारीलाई चप्पलले कु,ट्न थाल्छिन् । अधिकारीले आफूले अह्राएजति सबै काम गरिरहेको भनेर नेतृलाई जानकारी दिएको पनि सुन्न सकिन्छ ।
भिडियोमा सोनालीले आफू माथि दु,र्व्यवहार पूर्ण तरिकाले बोलेको भन्दै रिस पोखेको पनि देख्न सकिन्छ । यहाँ रोचक कुरा के छ भने त्यहाँ एक प्रहरी अधिकारी पनि उभिएको देख्न सकिन्छ जसले सोनालीलाई एकपटक पनि रोक्न कोसिस गर्दैनन् । कांग्रेसका प्रव क्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले यो भिडियो ट्वी’ट गर्दै मनोहर लाल खट्टर सरकार माथि आ’रोप लगाएका छन् ।
उनले प्रश्न सोधेका छन्, ‘के हरियाणाका कर्मचारी बिजेपी नेता मार्फत् अ’पमानित हुन र थ’प्पड–चप्पल खानका लागि हुन् ? के हरियाणाका कर्मचारी भाजपाका नो’कर हुन् ? के कर्मचारी ज’नावर हुन् ? का’रवाही कहिले गर्नेछौ?’ सोनाली फोगाट विधानसभा चुनावका बेला पनि चर्चामा आएकी थिइन् । उनको चुनावी प्रचारको क्रममा थुप्रै चर्चा वि’वादमा तानिएको थियो । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।